Shardiga Imtixaanka "kjentmann sprøve" oo wadayaasha tagaasida laga joojiyay. - NorSom News
Shardiga Imtixaanka “kjentmann sprøve” oo wadayaasha tagaasida laga joojiyay.
Dowlada Norway ayaa bilo kahor baarlamaanka u gudbisay soo jeedin ay ku codsaneyso in isbadal lagu sameeyo xeerka iyo sharciga gaadiidka dadweynaha ee Tagaasida.
Dowlada ayaa isbadal hada ku sameysay sharciga tagaasida, waxaana magaalada Oslo la fududeeyay shuruudaha ku xiran wadista baabuurka tagsiga.
Imitxaanka “kjentmannsprøve” oo kamid ahaa shuruudaha lagu xiro qofka raba in la siiyo ogolaanshaha wadista taxi-siga ayaa hada meesha laga saaray. Taas oo ka dhigan in qof walba uu hada codsan karo ogolaanshaha wadista taxi-siga, hadii caafimaadkiisu uu fiicanyahay, wax danbi ahna uusan galin.
Sidoo kale dadka ka yimaada Yurubta kale, gaar ahaan wadamada la isku yiraahdo EØS ayaa iyagana loo ogolyahay inay Oslo ku dhex wadaan taxi-siga, hadii ay buuxiyaan shuruuda caafimaadka iyo tan danbi la ´aanta.
Inkasta oo meesha laga saaray imtixaanka “Kjensmannsprøven”, hadana shirkadaha tagaasida ayaa fursad u heysta ama xor u ah inay qofka ay u dhiibayaan baabuurka uu aqoon fiican u leeyahay magaalada.
Shirkadii bixin jirtay koorsooyinka iyo imtixaanka wadista baabuurka taxi-siga, ayaa iyadna bishii lasoo dhaafay albaabada loo laabay.
Xigashi/kilde: Slutt på krav om kjentmannsprøve for taxisjåfører
Previous articleBuug uu qoray saaxiibka gabadha boqorka Norway oo la joojiyay daabacaadiisa.
Next articleDowlada oo rabta in Nimanka Norwiijiga ah lagu adkeeyo inay Norway keenaan, xaasas ay dibadda kasoo guursadeen.